Inona no tokony ho fantatrao momba ny Arts martial Arts Koreana
Ny zava-misy momba ny styles of Arts martial arts
Chuck Norris dia mpitsabo malaza
Ny kintan'ny Akata Chuck Norris dia nandray ny fampiofanana ara-batana voalohany tamin'ny fomba ofisialy Koreana. Izy dia nanomboka tamin'ny tang soo do , mba ho voatokana. Raha nahita ny sarimihetsika ara-batana ny haino aman-jery na naheno ny iray tamin'ireo vazivazy momba azy ( lisitra eto - tena tsara tokoa izy ireo), tsy voatery ho fantatry ny vahoaka fa ny fiandohan'ny koreana dia ny fiaviany. Fa ny tang soo do dia lavitra ny hany karazana karajia koreana. Misy ihany koa ny tae kwon do , ny art martial artifisialy indrindra eran-tany. Marina izany, aleo lavitra kokoa noho ny karate sy kung fu.
Noho izany, inona no fantatry ny mpitsabo arabo koreana? Inona no mampiavaka azy ireo? Ny fifehezana Acrobatic, ny fitoviana amin'ny endriky ny Japoney sasany sy ny lazany malaza, dia mahatonga azy ireo hipoitra. Amin'ny alalan'ity fanadihadiana ity, dia fantaro ny zava-bitan'ny karajia koreana.
Ny Korean martial arts dia manana mitovy amin'ny judo . Ny anaran'ny style dia hapkido, ary zavakanto fitifirana natao hametrahana ny olona eny an-damosiny haingana sy mahomby. Ny art koa dia miankina amin'ny fitokonana.
Hapkido dia midika hoe "ny lalan'ny fandrindrana sy ny fahefana anaty." Nofintinin'ireo lehilahy koreanina roa: Suh Bok Suh sy Choi Yong Sul.
Indray andro i Suh dia nahita lehilahy (Sul) niady ireo mpanafika maro. Mpifanaraka mainty hoditra Judo, nanasa an'i Sul i Suh hanofana miaraka aminy. Sul dia nanao, mampiseho an'i Suh amin'ny endrik'i Daitô-ryû Aiki-jûjutsu.
Nanjary nalaza ny lamaody taorian'ny nandresen'i Suh ny iray tamin'ireo fahavalo ara-politikan'ny rain-drazany tamin'ny fiadiana amin'ny ady an-tànana. Ny zava-misy fa ny fahavalo dia lehibe noho i Suh dia nanampy ihany ny fiangaviana.
Taorian'izay dia nanampy tamin'ny fampielezana hapkido i Ji Han Jae. Nampianariny ny vatan'ny filoham-pirenena Koreana Park Jung Hee. Tamin'ny 1965 dia nanomboka ny Fikambanan'ny Hapkido ao Korea izy. Natsangany ho an'ny miaramila ny tafika tamin'ny famindrana teknikam-panafarana Koreana sy ny famoronana. Ny endriky tokana noforoniny dia nantsoina hoe moo hapkido ota.
Jae dia niady hevitra tamin'ny 1986 fa nanangana hapkido izy, saingy tena niady hevitra ny fanambarana nataony. Bebe kokoa "
Ny fanatanjahatena amin'ny karazana fiarahamonim-bala na MMA dia nanjary nalaza be tato ho ato. Ny fifaninanana Ultimate Fighting dia nanazava lanja iray tamin'ny MMA nanomboka tamin'ny 1993. Ary ankehitriny dia misy mpikaroka marobe marobe mianatra any am-pianarana fa tsy miangona afa-tsy fomba tokana fotsiny.
Saingy rehefa noforonina tao amin'ny Hyuk Suh ny karazam-borona kuk sool, dia azo inoana fa tsy nanana fifantohana ara-panatanjahantena izy. Izany dia nilaza, fa tena tian'izy ireo ny hampifangaro ny karazam-borona koreana isan-karazany amin'ny famaizana manan-kery iray, na dia misy ny fahasamihafana manahiran-tsaina aza.
Tae Kwon Do dia lazaina fa karazana fitaovam-piadiana manerantany indrindra amin'izao tontolo izao ankehitriny. Ity zavakanto mitongilana ity dia fantatra amin'ny fakana an-keriny ataony, ny hetsika mahavariana, ary ny ilaina avy lavitra. Io fomba fanatanjahatena Koreana mahavariana io ihany koa dia voatery nampiavaka ny endriky ny Japoney, satria i Japon no nibodo an'i Korea, ary voarara ny zavakanto koreana koreana. Fa tae kwon do, izay tena anaran'ny anarana ofisialy ho an'ny karazam-pahaizana Koreana marobe, dia nahomby nandroso - na dia teo aza ny japoney Japone. Bebe kokoa "
Taekkyon dia fomba nentim-paharazana koreana fahiny izay mampianatra ny mpitsabo tanana ny fitokonana, ny fitokonan'ny tongotra, ny fametahana andry sy ny vatany. Ny fihetsikao dia hafanana sy dihy. Betsaka amin'ireo zavakanto Koreana no nindrana zavatra avy amin'io fomba fanao io, izay nisedra tena goavana nandritra ny fibodoana Japoney.
Satria taekkyon dia mampianatra teknika maro samihafa, dia karazana miaramila marobe ho an'ny olona izay tsy afaka manapa-kevitra ny amin'ny fomba mahazatra, ny tany sy ny fombafomba. Afaka mahita ny zava-drehetra ao anatin'ity fomba ity ianao.
Raha niezaka ny hampiray saina ny karazana fiarovany rehetra i Korea, tamin'ny anarana iray, dia nandao an'i Hwang Kee ilay mpanorina azy. Na dia misy aza ny fitoviana misy eo amin'ny tang soo do and tae kwon do, dia misy koa ny fahasamihafana lehibe. Tae kwon, ohatra, dia mitaky fifaninanana ara-panatanjahan-tena sy fifaninanana. Bebe kokoa "
Ahoana ny fomba hamoronana ny dihy manokana anao
Tantaran'ny tantara sy tanjon'ny Tang Soo Do
Inona no atao hoe dihy folk?
Fantaro bebe kokoa momba ny Ballet Coppelia
Mianara mikasika ny dihy sariaka sy vendrana Cha-Cha
Styles Arts martial arts: Muay Thai vs. Karate
Inona avy ireo loha-dihy Basic Ballroom?
Fidio ny dihy
Charlie Brown Dance Dingana
Inona no atao hoe Elevé?
Fampahafantarana ho an'ny sarimihetsika Shinoa an-tserasera
Tantaran'ny tantara sy tantara momba an'i Tae Kwon Do
Fianarana fanampiny amin'ny mpianatra
Jeografia ho an'ny ankizy
Fanontaniana momba ny PMP
Ny maha-zava-dehibe ny famerana ny famaranana amin'ny fari-pahaizan'ny fitaovana
Emory sy Henry College Admissions
Maps of the Forests of the World
Ady An-trano Amerikanina: USS Monitor
Inona no lanjan'ny hetra sy ny vidin'ny vola?
Toro-bozaka fanaingoana mololo - Chloride Sodium
42 Tsy maintsy mamaky boky Vehivavy Vehivavy Vehivavy Vehivavy
Inona no atao hoe fanajana? Inona no dikan'ny hoe manaja ny fivavahana na ny teôsisma?
Top 9 Psychedelic Furs Lire la suite de 80 '
Torohevitra ho an'ny fampiharana Delphi fampiharana
Ny Championship Evian
Miteny ho an'ny masoivoho amerikana ny fisamborana
Carbonate Compensation Tahan'ny (CCD)
Inona no Atao Maoderina?
Garage Mate ho an'ny EV anao: Ahoana ny momba ny minivanina?
Inona ny famaritana ny fifindra-monina tsy ara-dalàna?
Inona avy ireo vokatra azo avy amin'ny herisetra?
Fanehoan-kevitra frantsay miaraka amin'i Casser
Hanova ny adiresinao amin'ny masoivohom-bola Canada
Lesona Hanampiana Ireo Mpianatra ny Teny Anglisy Mahalala ny lohatenin'ny gazety